अबको प्रधानमन्त्री देउवा! ओलीले देखाए हरियो झण्डा – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/अबको प्रधानमन्त्री देउवा! ओलीले देखाए हरियो झण्डा
अबको प्रधानमन्त्री देउवा! ओलीले देखाए हरियो झण्डा
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा निवासमा आजकल कांग्रेसका कार्यकर्ता भन्दा धेरै नेकपाका नेताको भिड धेरै हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग रुष्ट भएका नेकपाका नेता र प्रधानमन्त्रीकै विश्वास पात्र नेताहरु बेला बेलामा पुग्ने गरेका छन् । चार दिन अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले पनि कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेका छन्।
उनीहरुबीच वालुवाटारमै भेटघाट भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले भेटेको कुरा सेलाउन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीसंग रुष्ट भएका नेकपाका केही नेता फेरी कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न उनकै निवासमा पुगेका छन् । नेकपामा विवाद चलिरहँदा देउवा निवासमा नेकपाका नेताहरुको भिड बढ्न थालेको कांग्रेसका नेताले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले स्वयंले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्तारोहणका लागि सन्देश पुर्‍याएको चर्चा चलेको छ । त्यसका लागि उनले आफ्ना विश्वासपात्र नेता तथा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङ बुढानीलकण्ठ पठाएको बताइएको छ।
आफ्नै पार्टी भित्र कमजोर भएका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवक्षी दलसंग मिलेर सत्ता टिकाउन योजना बनाएको भन्दै कांग्रेसकै नेताहरुले भन्न थालेका छन् । देउवालाई भेट्न पुगेका नेम्बाङले समसामयिक विषयमा छलफल भएको बताएपनि सत्ताका लागि प्रधानमन्त्रीले ‘हरियो झन्डा’ देखाएको सन्देश लिएर गएको बताइएको छ। पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि नेकपाका दुई धार नै कांग्रेससँग नजिकिएका छन्।
नेकपाभित्रको विवाद चुलिएका बेला देउवालाई भेटेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा पार्टी फुट्यो कांग्रेससँग मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको चर्चा नेकपा नेताहरूबीच नै भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न सभापतिलाई बालुवाटार बोलाएको कांग्रेसले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाबीच नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वबारे कुराकानी नभएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताएका छन् । नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडामा कांग्रेसको कुनै सरोकार नभएको पनि शर्माले बताए। ‘यो भेटलाई नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वसँग जोडेर नेकपाका साथीहरूले र हाम्रो पार्टीले हेर्नुपर्ने छैन,’ उनले भने, ‘संसदसँगै जोडिएका विषयमा छलफल भएको थियो, जस्तो एमसिसी र निजामती कर्मचारी विधेयकलगायतमा कुरा भएका हुन्।’
भारतबाट १४ दिन हिँडेर काठमाडौं आएका एक जोडी, डेरामा छिर्न नदिएपछि बसभित्रै रात काट्दै